Lifele ukhiye iphoyisa ebelidunwa ngaseXobho | News24
Lifele ukhiye iphoyisa ebelidunwa ngaseXobho
Durban - Lifele ukhiye iphoyisa eligwazwe inqwaba yamanxeba ekhanda nasentanyeni ngesikhathi lidunwa imoto ngeSonto ebusuku KwaSawoti ngaseXobho, maphakathi neKwaZulu-Natal.
Amalunga omphakathi azibonele lesi sigameko, ababaza isihluku sababulali okuthiwa baqede ukubulala uWarrant Officer Thulani Mkhize, 50, bathatha isidumbu sakhe bayosiphosa ehlathini.
ILANGA lithole ukuthi u-W/O Mkhize obesebenzela esiteshini samaphoyisa KwaSawoti, enomuzi eMgwena eMid-Illovo ngaseMbumbulu, ugwazwe wabulawa ngabasolwa abangaziwa ngesikhathi bezama ukumduna imoto yakhe eyiChevrolet Aveo, ephuma emsebenzini elibangise emqashweni wakhe.
ILANGA likhulume nendodana yakhe, uMnu Mafika Mkhize, 27, eveze ukuthi uyise ubesebenza ehlala emqashweni egoduka uma kuphela inyanga. Uthi wehlelwe yilesi gameko esendleleni ebheke emqashweni wakhe, uhlaselwe ngamadoda angaziwa okuthiwa azame ukuvimba imoto yakhe ezama ukuyiduna.
OLUNYE UDABA: Kubulawe iphoyisa lase-KZN ngomkhonto
Kuthiwa u-W/O Mkhize uyicishile imoto phakathi nomgwaqo ngesikhathi ebona ukuthi kukhona okushaya amanzi. Kuthiwa uqede ukuyicisha wabe esekhipha ukhiye wawuphosa esikhotheni enzela ukuthi abasolwa bangakwazi ukuthatha imoto.
Abasolwa bathukuthele bagana unwabu bambhokoda ngommese ekhanda nasentanyeni. Baqede ukumbulala bathatha isidumbu sakhe bayosiphosa ehlathini eliseduze nomgwaqo, ngalapho obekukhona imoto yakhe.
Emuva kwalokho kuthiwa abasolwa bashaye bachitha nesibhamu sakhe somsebenzi nomakhalekhukhiwni wakhe.
UMnu Melusi Kweyama onguninalume ka-W/O Mkhize, uthi umshana wakhe ubengenazo izitha, bayasola ukuthi abasolwa bebefuna imoto.
"Siyasola ukuthi into ebenze bathukuthela baze bambulala wukuthi ulahle ukhiye esikhotheni bangabe besakwazi ukuthola imoto ababeyifuna. Sibuhlungu ngendlela abulawe ngayo," kusho uMnu Kweyama.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, Colonel Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokubulala, amaphoyisa aphansi phezulu nophenyo.